Pension Freigeist • Amagumbi okulala amabini - I-Airbnb
Pension Freigeist • Amagumbi okulala amabini
Witzin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguManuel
igama lam ndinguManuel kwaye ndingumamkeli wakho kwiPension Freigeist eWitzin.
Sivule iPension & Brasserie yethu ngoMeyi ka-2021. Amagumbi amaninzi eendwendwe, indawo yeeholide kunye noluhlu olubanzi lweenketho zokutyela zikulindele kwindawo yasemaphandleni. Sisiqalo esifanelekileyo sokujonga indawo ngemoto, ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile ...
Amagumbi okulala amabini amalunga ne-20 square metres kwaye anomandlalo amatsha anokuba yi-160 cm okanye i-180 cm ububanzi.
- amagumbi Bright
- Iimfama zangaphandle
-ITV enoqhagamshelo lwentambo
-Idesika + WiFi
- Impahla + yokuxhoma
- Ijeli yeshawa
Ilinen entsha yebhedi kunye neetawuli zokuhlambela zibandakanyiwe! :)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Witzin